Martech Zone - Teknolojia marketing
Alakamisy, Septambra 22, 2005 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Fotoana famakiana: <1 minitra Tena tsy dia ilaina loatra ny mampientanentana ahy. Izaho dia tao amin'ny kilasy fanofanana Powerpoint tamin'ny andro hafa. Tsy naninona ny kilasy… Nahazo toro-hevitra roa aho. Ilay lehibe indrindra nandehanako niaraka, tsy nisy ifandraisany tamin'ny Powerpoint. Nasehon'ilay mpanazatra taminay ny fomba fandatsahana ny pikantsary fikandrana amin'ny famelabelaranay. Notehiriziko foana ny bokotra PRT SC (Print Screen) ary namboariko ny sary
Aza raharahiana ny cookie farany
Asabotsy, Septambra 17, 2005 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Fotoana famakiana: <1 minitra Aza raharahiana ny Cookie farany Ity no hafatra mofom-pahalalana tsara indrindra hitako. Vakio aorian'ny fankafizanao ny akoho Thai ao amin'ny Panda Express ny zoma.
Izay nandidian'ny dokotera fotsiny?
Alarobia 24, 2005 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Fotoana famakiana: 2 minitra Tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo, dia nanao dia an-tany lavitra tany Victoria sy Vancouver, British Columbia aho. Nahazo diplaoma tamin'ny High School tany Vancouver aho 20 taona lasa izay ary indroa niverina aho. Tanàna tsy mampino - madio, tsara tarehy, maoderina ary salama. Nandany fotoana kely tamin'ny namako akaiky indrindra avy amin'ny lisea aho ary nahazo lavaka golf 9 aza izahay. Faran'ny herinandro nahatalanjona izany! (Ary nandeha tsara ihany koa ny orinasa!) Nahamarika aho
Fotoana famakiana: <1 minitra Te-hanaraka ny lahatsoratro Open = Growth aho nandritra ny fotoana kelikely. Voalaza ao anatin'io lahatsoratra io ny mety hahitana fahombiazana rehefa mifantoka amin'ny fomba fampidirana vahaolana miaraka amin'ireo vahaolana hafa ny olona. Misy lafiny hafa amin'izany, ary izany dia ny orinasa hametra ny fiasan'ny vahaolana arahin'izy ireo amin'ny votoatin'ny fampiasan'izy ireo. Mety hampidi-doza ny manampy be dia be amin'ny vokatra, serivisy ary endri-javatra. Miantso azy io ny mpandahatra programa
Alakamisy, Jolay 28, 2005 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Fotoana famakiana: <1 minitra Nisy ny olona nanerana ny firenena izay nisento fatratra tamin'ny fahitana ny Shuttle Discovery nahomby tamin'ny asany. Misy ireo mino fa fandaniam-bola be dia be ny vola an'arivony tapitrisa dolara amin'ny programa habakabaka. Tsy afaka nifamaly bebe kokoa aho. Tahaka ity fanombohana farany ity, ny fametrahana tanjona izay tsy azo tratrarina mihitsy no mahatonga antsika hanana fanavaozana sy fandrosoana. Ny programa habakabaka dia iray amin'ireo programa izay
V Prev 1 ... 1,025 1,026 1,027 Next →
Page 1026 ny 1027